दीपिकाको ‘छपाक’ लाई स्क्रिप्ट चोरीको आरोप – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
दीपिकाको ‘छपाक’ लाई स्क्रिप्ट चोरीको आरोप
By Digital Khabar Last updated Dec 25, 2019 47 0
अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको बहुप्रतिक्षीत फिल्म ‘छपाक’ रिलिज अगावै कानुनी झमेलामा फस्ने देखिएको छ । लेखक राकेश भारतीले ‘छपाक’ लाई लिएर बम्बे हाई कोर्टमा मुद्धा दर्ता गरेका छन् ।
उनले यो फिल्मको कहानी आफूले लेखेको दाबी गरेका छन् । सबैभन्दा अगाडि यो फिल्मको स्क्रिप्टको बारेमा आफूले सोचेको र जसको नाम ‘काला दिन’ राखिएको उनी बताउँछन् । लेखक भारतीले भनेका छन्, ‘वर्ष २०१५ मा इन्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशनमा फिल्मको रजिस्टर गरिएको थियो । त्यसबेलादेखि म फिल्मको स्क्रिप्टमा काम गरिरहेको थिएँ । मैले फक्स स्टार स्टूडियोलाई पनि अप्रोच गरेको थिएँ, तर विभिन्न कारणले हुन सकेन ।
त्यसपछि मैले फिल्मको आइडिया र कहानी प्रोडक्सन हाउसलाई सुनाएँ, जसमाथि ‘छपाक’ बनेको छ ।’ आफ्नो आइडिया फिल्ममा प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि राकेशले फिल्मको निर्मातासँग पनि कुरा गरेका थिए रे । तर, निर्माताले आफ्नो कुरा सुने पनि नसुनेझैँ गरेपछि आफूले कोर्टको ढोका ढकढकाएको उनी बताउँछन् । राकेशले फिल्म ‘छपाक’ मा राइटरको रुपमा क्रेडिट दिन कोर्टमा आग्रह गरेका छन् । साथै, फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउन पनि उनले माग गरेका छन् ।
मेघना गुलजार निर्देशित फिल्म ‘छपाक’ एसिड अट्याक सर्वाइभर लक्ष्मी अग्रवालको जिन्दगीमाथि आधारित भएर निर्माण भएको हो । यसमा दीपिका मालती नामकी एक साधारण युवतीको भूमिकामा छन्, जोमाथि केही युवकले एसिड प्रहार गर्छन् । १० जनवरी २०२० मा रिलिज हुने फिल्ममा विक्रान्त मेसीको पनि अभिनय छ । फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भैसकेको छ ।
मुसर्रफ प्रकरण : पाकिस्तानी अदालत र सेनाको टक्कर !
उपेन्द्र यादव : ‘गेट लस्ट’ भनेर प्रधानमन्त्रीले अपमान गरे